Umvelisi weSodium Hyaluronate, umzi-mveliso waseHyaluronic Acid, umvelisi we-hyaluronan - AWA
Iimpawu zethu eziphambili
YINTONI I-SODIUM HYALURONATE
I-sodium hyaluronate ityuwa ethathwe kwi-hyaluronic acid, kunye nobunzima bemolekyuli ukusuka kwi-3000Da ukuya kwi-2500KDa kunye ne-CAS no. 9067-32-7. Yeyona polymer mucopolysaccharide edityaniswa rhoqo zii-N-acetylglucosamine kunye nee-D-glucuronic acid disaccharide unit. Kubakho ngokwemvelo kulusu, amehlo, amalungu kunye namanye amalungu kunye nezihlunu ezisebenzayo. Kufunyenwe ukuba i-sodium hyaluronate inemisebenzi emininzi yokusebenza komzimba, njengokuthatha inxaxheba kwi-moisturizing, i-lubrication, ukupholisa amanxeba, ukulungisa izicubu, ukuphinda usebenze, ukuphendula kokuvuvukala, ukuphuculwa kwe-embryonic, njl.
I-sodium hyaluronate isetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zokutya, izimonyo kunye namayeza. Ukukhuseleka kwayo kuqinisekisiwe, kwaye akunakulungeka ukuba kubangele ukusabela kwe-anaphylactic kuba kusasazeka ngokwemvelo emzimbeni womntu. Zimbini iindlela zokuvelisa i-sodium hyaluronate, isuswe kwinkuku yenkuku, kunye nobushushu bebhayoloji. Sisebenzisa i-Biological Fermentation, kunye ne-non-GMO, akukho mthombo wesilwanyana.
> ICOSMETIC GRADE sodium hyaluronate
> INDLELA YOKUFUNDA IBAKALA sodium hyaluronate
I-sodium hyaluronate yeyona nto iphambili kwezicubu ezinxibelelanayo ezinjengezinto eziphakathi zoluntu, umzimba we-vitreous, kunye nencindi ye-synovial. Inemisebenzi emininzi yomzimba. Xa iyancipha, ukugula kuza. Ke abantu bayisebenzisa ukunyanga izifo zamehlo kunye nokudibana, imibimbi egudileyo, amanxeba aphilisayo, njl njl.
> UKUTYA GRADE sodium hyaluronate
I-sodium hyaluronate isasazeka ngokwemvelo emzimbeni womntu, encipha ngelixa ixesha lihamba. Kufunyenwe ukuba abantu banokufumana i-sodium hyaluronate ngokuthatha ukutya. Iya iba ngakumbi nangakumbi into yokuba abantu banezongezelelo zokutya ukuze bongeze impilo. Ihlala ivela kunye neevithamini, i-chondroitin sulfate, njl.
I-Oligo sodium hyaluronate yimveliso entsha ephuculwe yiteknoloji yokuthothisa i-bio-enzymatic. Ubunzima bemolekyuli yayo yi-3,000Da-10,000Da, efunyanwa lula ngumzimba womntu kwaye inefuthe elinzulu lokunyibilika.
> I-EYE DROPS IBANGA le-sodium hyaluronate
I-sodium hyaluronate inokuphucula kakhulu i-bioavailability yeziyobisi ngokuqina komzimba, ukubumbana kolusu, kunye nokudityaniswa neziyobisi. Izibonelelo zayo azinakuthelekiswa nezinye izinto zepolymer. Ingatshintshwa ngokudibanisa iminqamlezo kunye nokulungelelanisa kwakhona ukwandisa ixesha lokugcina elisweni kunye nokunyusa ngakumbi ukuqinisekiswa kwesiyobisi.
Kwi-Paris yezithambiso 2019
I-PCHI Shanghai 2019
I-CPHI Shanghai 2019
UMVUZO WEMveliso 2020.8
UKUQEQESHWA NGOKUFUNDA I-2020.7
Vitafoods Geneva ngo-2019
SHANDONG AWA BIOPHARM CO., LTD. yasekwa nge-15 kaJulayi ngo-2010. Inkampani okwangoku ineempahla ezizigidi eziphantse zibe li-100 lezigidi, ezinabasebenzi abangaphezu kwe-100. Umthamo wonyaka ujikeleze i-130MTs okwangoku, kubandakanya i-100MTs ye-cosmetic kunye nenqanaba lokutya i-HA, i-20MTs ye-oligo HA, i-10MTs yamehlo ehla kwi-grade HA kunye ne-3MTs yenqanaba le-inj. Ngobuchwephesha bemveliso obuphambili, umgangatho ophezulu wemveliso, kunye nenkonzo entle yokuthengisa emva kokuthengisa, siphumelela iimbasa ezintle kunye nokuthenjwa okuvela kubathengi.
Emva kweminyaka elishumi 'yokuzama okukhulu, sidwelise kwiBhodi eNtsha yesiThathu (Ikhowudi yesitokhwe: 832607) kwaye safumana izatifikethi ezininzi kunye neziqinisekiso, ezinje nge-ISO9001, DMF, NSF, KOSHER, HALAL, ECOCERT, COSMOS, iLayisensi yokuvelisa iziyobisi, iSatifikethi sePhakamileyo- Ishishini lobuchwephesha, njlnjl. Kwaye siyaqhubeka sikhula kwaye sikhula. Ilizwi elinzima, elizayo liyeza eliqaqambileyo.
NO.488 Huanghe12 Road, Binzhou mzi, ShandongProvince, China
Ibanga le-Oligo HA
Ibanga le-cosmetic HA
Amehlo ehla kwinqanaba le-HA
Qalisa ukuvelisa kwakhona 2020.8
Ulwakhiwo lweqela laseLwandle 2020.7
Izatifikethi zihlaziywa (2020/6/23)
Awula yokubuyekeza Statement
LOGO Tshintsha Statement
Hot Products ,Sitemap ,AMP mfono
I-Oligo sodium hyaluronate , I- Wamehlo grade sodium hyaluronate, I- Inaliti grade sodium hyaluronate